» Zarao ny fialan-tsasatrao Zarao ny fialan-tsasatrao - Galveston County Food Bank
Tsindrio eto raha hiverina amin'ny tranokalan'ny Banky Sakafo ao amin'ny Galveston County
SE Texas dia nirohotra nanampy tamin'ny fitaomana fanantenana sy fanehoana fitiavana ho an'ny ABC13's 41st Annual Share Your Holidays drive.
Ny vokatra vonjimaika dia tena manentana:
Mihoatra ny $ 180,000 ary mbola mitohy
Galveston Ball HS dia nahita firaketana vaovao tamin'ny fotoana rehetra: sakafo 29,181 kilao
Araho hatrany raha mila fanazavana fanampiny momba ny hetsika 2022 Share Your Holidays
Kitiho ny Logoy raha hisintona Dikan-teny High Resolution ho an'ny fitaovam-barotrao.
Iza no afaka mampiantrano sakafo SYH?
Na iza na iza te hanampy hampitsahatra ny hanoanana dia afaka mampiantrano fiara mitondra sakafo mandritra ny Zarao ny fialan-tsasatrao. Olona, ​​fianakaviana, vondrona, klioba, fikambanana, fiangonana, orinasa, sekoly, sns.
Karazana entana inona no ekenao amin'ny SYH food drive?
Manaiky ny karazan-tsakafo tsy mety simba rehetra izay milamina sy mahomby izahay tsy mitaky vata fampangatsiahana.
Manaiky entana tsy sakafo ve ianao?
Eny, manaiky ihany koa ny zavatra fidiovana manokana toy ny:
- lamba famaohana taratasy
Inona avy ireo entana tsy ekena?
-mba sakafo an-trano
-sakafo mety hohanina izay mila frizida
-Ny entana misy daty lany daty
-Ny zavatra totofana na simba.
Inona avy ireo fomba fanao tsara indrindra hampiantranoana fihinana sakafo?
-Manomeza toerana mpandrindra hanaraha-maso ny fizotran-tsakafo.
-Mifidiana Tanjona ho an'ny sakafo tianao ho angonina.
-Fidio ny daty tianao hampandehanana ny sakafo fihinananao.
-Fidio ny toerana misy anao amin'ny fanangonana zavatra, faritra fivezivezena be izay azo antoka.
-Misorata anarana amin'ny GCFB amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'i Julie amin'ny 409.945.4232 na julie@galvestoncountyfoodbank.org.
-Atondroy ny Drive anao hampahafantatra amin'ny hafa ny hetsika nataonao tamin'ny alàlan'ny taratasy, mailaka, flyer ary tranokala. (alao antoka fa ampidiro ny logo GCFB amin'ny fitaovana marketing rehetra)
Ahoana no fomba hampahafantarako ny fiara mitondra ny sakafo SYH?
Zarao amin'ny alàlan'ny media sosialy, taratasim-baovao, bulletin, fampandrenesana, sidina, memo, e-fipoahana, ary afisy.
Misy sary famantarana ofisialy GCFB ofisialy avo lenta amin'ity pejy ity azo alaina. Azafady mba ampidiro ny sary famantarana anay amin'ny fitaovana marketing nataonao ho an'ny hetsika fizahana sakafo. Raha mila torohevitra bebe kokoa momba ny famoronana fitaovana marketing dia sintomy ny Kitapo sakafo sy tahirim-bola.
Tianay ny manohana ny hetsika ataonay! Hamarino tsara fa hizara aminay ny flyers anao, hahafahanay mampiroborobo ny hetsikao amin'ny sehatra media sosialy koa.
Alao antoka fa asio marika izahay amin'ny media sosialy!
Ny fanaovana dokambarotra no lakilen'ny fahombiazan'ny fiara!
Aiza no hitondrako ny Fanomezana SYH?
Ny fanomezana rehetra dia azo zaraina amin'ny toerana roa Alarobia 1 Desambra 2021 manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 hariva.
Sekolin'i Ball - 4115 Avenue O, Galveston
Fivarotana vola SYH
Inona no atao hoe famatsiam-bola?
Ny famatsiam-bola dia manangona fanomezana ara-bola ianao ho fanomezana amin'ny banky sakafo hanohanana ireo programa marobe natao hanomezana sakafo ireo sahirana.
Aleo manome vola noho ny sakafo?
Ny vola sy ny sakafo dia manampy betsaka amin'ny fanirahana anay hitarika ny tolona hamongorana ny hanoanana. Miaraka amin'ny GCFB izay mpikambana ao amin'ny Feeding America sy Feeding Texas, ny fahefa-mividinay dia ahafahantsika manome sakafo 4 isaky ny $ 1, izay manome anay fahafaha-mividy sakafo bebe kokoa noho ny olona afaka mankany amin'ny magazay fivarotana.
Ahoana no fanangonana vola amin'ny fizarana fizarana ny fialantsasatrao?
Ny vola dia azo angonina ho vola, hizaha na amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampiasana ny takelaka fanomezana SYH etsy ambony.
Ho an'ny vola, raha misy olona manome vola te hahazo tapakila azo esorina, azafady mba ampidiro ny anarany feno, ny adiresy mailaka, ny mailaka ary ny nomeraon-telefaony miaraka amin'ny vola.
Ho an'ny fanamarinana, azafady mandoa vola amin'ny Galveston County Food Bank. Mariho ny fikarohanao / anaran'ny vondrona misy anao eo ambany ankavanan'ny fanamarinana, mba hahazoan'ny fikambanana / vondrona misy trosa anao.
Ho an'ny Internet, rehefa manolotra ny Food & Fund Drive efa vitao ianao dia ampahafantaro anay fa te hamporisika ny fanomezana an-tserasera ianao ary misy tabilao manokana azo ampidirina ao amin'ny menio latsaka, noho izany ny hetsika fizahan-tsakafo dia hahazo ny vola amin'ny fanomezana an-tserasera.
Tsindrio eto raha hijery safidy mailaka
9 maraina - 3 hariva (talata-alakamisy)
9 maraina - 12 hariva (zoma)
Ora fiasana: 8 maraina ka hatramin'ny 4 hariva (Alatsinainy-zoma)
Trano fitantanan-draharaha fitantanana:
213 6th Street N., tanànan'i Texas
Ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County dia voasoratra anarana ho fikambanana tsy mitady tombony 501 (c) (3). Ny fandraisana anjara dia azo alaina araka ny lalàna alain'ny lalàna.
Ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County dia mino ny fanaovana asa-tanana amin-kitsimpo sy tsy fivadihana tanteraka. Serivisy jiro mamela ny Galveston County Food Bank mitazona ireto fitsipika ireto amin'ny alàlan'ny fanaovana fitaovana ho an'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny mpiasan'ny Food Bank, mba handefa tatitra tsiambaratelo, sosokevitra na fitarainana amin'ny antoko fahatelo izay manampy ny fitantanan-draharahan'ny Bankin'ny Sakafo any Galveston hamaha ny olana ary mitazona ny maha-matihanina azy ireo. fenitra.
Ity andrim-panjakana ity dia mpamatsy tombontsoa mitovy.
Azafady tsindrio eto raha hamaky ny tsiambaratelo momba ny Donor.